चर्चमा पैसा पाइन्छ, बोरा लिएर आउनुस ! – Rastriyapatrika
चर्चमा पैसा पाइन्छ, बोरा लिएर आउनुस ! २०५८ साल तिरको कुरा हो । मेरो एकजना सहपाठी मित्रले सधै सोधनु हुन्थियो, “सर, हजुरले चर्चमा पैसा पाउनु हुन्छ रे नि?” “हो नि ! तपाई आउनु भयो भने तपाईले पनि पाउनु हुन्छ । एक दिन अलि ठुलै Purse लिएर जाउला, तपाई पनि चर्चबाट पैसा लिएर आउनु होला” मैले भन्थे । एक दिन उहाले साच्चै चर्च जाने विचार गर्नु भो । उहा र म Birtamod को एउटा स्थानीय चर्चमा गयौ ।
धुमधाम सग भजन गायौ । सङती आधा हुन लगेको थियो होला, एकजना जवान भाई झोला लिएर भेटि उठाउदै हाम्रो छेउ आईपुगे । त्यो बेला मेरो भेटि हाल्ने क्षमता २० रुपैया मात्र थियो । तर मैले आट गरेर रु १०० भेटिको झोलामा हाले । मेरा मित्रले त्यो दृश्य राम्ररी हेर्नू भो । उहाले मलाई सोध्नु भो, “मैले पनि भेटि हाल्नु पर्छ ?” मेरो उत्तर थियो “तपाईको आफ्नो बिचार हो।” उहाले फेरि अर्को प्रस्न राख्नु भो, “होइन, कति हाल्नु पर्ने हो ?” मैले भने “मैले कति हाले देख्नु भो होइन त !” उहाले पनि १०० को नोट Purse बाट निकाल्नु भो र भेटिको झोलामा खसाल्नु भो ।
सङती सकेर कोठा जादै गर्दा मैले बाटामा उहालाई सोधे “कति पैसा पाउनु भो त?” उहाको उत्तर थियो, “तपाई पनि हावा कुरा नगर्नु न।” मैले उहालाई धाप मारेर भने, “आज देखि उता तपाईं पनि चर्चमा पैसा पाइन्छ भनेर हावा कुरा कहिले नगर्नु होला।” त्यस्पछी उहाले यस्तो हावा कुरा फेरि कहिले गर्नु भएन । आज पनि हाम्रो मित्रता उतिकै बलियो छ । हामी भेट हुदा एक अर्कालाइ यो घटनाको बारेमा याद गराउछौ र पेट मिचिमिचि हास्छौ ।
Source : BhutaneseNews.com